🍒Kudzokorora kwenzvimbo inozivikanwa online kasino FastPay 2021
FastPay Casino >Kudzokorora kwenzvimbo yeakakurumbira pamhepo kasino FastPay
Kudzokorora kwenzvimbo yeakakurumbira pamhepo kasino FastPay
Webhusaiti yeFastPay haisati yazivikanwa kune vese vanofarira kubhejera, nekuti kasino yakaonekwa chete muna2018. Paunoishanyira, zvinobva zvangojeka kuti ichi chirongwa chehunhu. Iyo saiti inopa yakavhurika kuwana kune rwose ruzivo nezve FastPay - rezinesi, kumusoro-kumusoro miganho, nezvimwe
FastPay pamhepo kasino interface
Webhusaiti yekasino yashandurwa muchiRussian, Chirungu, ChiFinnish, ChiTurkey, Chiukraine, ChiSpanish, ChiSweden, ChiPolish, ChiJapane nemimwe mitauro. Sarudzo yavo iri kuwedzera gore rega rega. Iyo saiti ine yakajairwa uye nharembozha vhezheni. Iyo saiti yemafoni efoni inochinjirwa kumutambo uchishandisa iyo yekugunzva padhi, inongoerekana yagadzirisa kune iyo skrini yefoni uye piritsi kana iwe uchishanya.
Menyu huru iri kumusoro kwazvo. Iyo inomiririrwa nezvinhu zvinotevera:
fomu yekupinda - yekutendera, unofanirwa kupa email kero nephasiwedi;
bhatani rekuvhura fomu rekunyoresa;
bhatani kusarudza mitauro yemutauro.
Pane hombe chikwangwani pasi pemenu. Iine ruzivo nezve kukwidziridzwa, mitambo yazvino, nhau dzekambani, nezvimwe.
Chikamu chikuru cheiyo huru skrini yakatsaurirwa kuimba yemutambo. Inosanganisira menyu yekukurumidza kufamba pakati pezvikamu:
"Slots" - michina yemaketani;
Rarama - mitambo yemabhodhi, mitambo yeTV nevatengesi;
"Mitambo Mitsva" - zvinhu zvitsva;
Roulette - dzakasiyana mhando dzeroulettes;
"Tenga Feature" - masiketi ane kugona kutenga mabhonasi kutenderera;
"Bitcoin, ETH, LTC" - michina inokwanisa kubheja mu cryptocurrency.
Pasi chaipo pemenu pane fomu yekutsvaga mitambo nemazita. Pano unogona kuratidza mitambo yeumwe mupi. Pakazara, saiti iyi ine vanogadzira vanopfuura makumi matatu - Yggdrasil, Tomhorn, Kagaming, iSoftBet, Microgaming, nezvimwe. Mitambo yese yakasimbiswa uye ine yakavakirwa-mukati kurongeka kudzora system.
Pazasi pane iyo mitambo kubva muchikamu chakasarudzwa. FastPay slot michina inofanirwa kunge iri yemahara modhi. Iwe hautombofaniri kunyoresa kuti umhanye slots mune demo modhi.
Peji rekumba rinoratidzawo ruzivo nezvevachangobva kukunda, kuhwina kwakanyanya uye majeketi akahwinwa.
Pazasi chaipo peiyo webhusaiti yeFastPay yepamutemo pane ruzivo rwepamutemo, zvinongedzo ku"Chibvumirano cheVashandisi","Mitemo nemamiriro", chikamu chereferenzi. Iko kumashure kweiyo saiti kune rima, uye iwo mavara uye madhairekitori akajeka uye ane hupenyu. Musanganiswa uyu unotaridzika chaizvo uye wakanaka.
FastPay Vatengi Tsigiro
FastPay Casino inopa vatengi rutsigiro nguva dzese. Pamibvunzo nezvinonetsa, ndapota nyorera:
email yepamutemo - chinongedzo chinogona kuwanikwa muchikamu cheRutsigiro;
kuburikidza nehurongwa hwetikiti - fomu rekutumira chikumbiro riri muchikamu che"Tsigiro";
kuburikidza neinternet chat - chinongedzo kwairi chiri mukona yezasi yekurudyi.
Mhinduro kumibvunzo yakajairika dzinowanikwa muchikamu che"FAQ".
FastPay Casino Kubhadhara
Ruzivo nezve yakatsigirwa nzira dzekubhadhara, dhipoziti uye kubvisa muganho zvinopihwa mu"Kubhadhara" uye"Mitemo neMamiriro" zvikamu. Ku FastPay kasino iwe unogona kuvhura account mumadhora, maeuro, chiNorway krone, Australia, Canada neNew Zealand madhora, yen, zloty, South African rand, inozivikanwa cryptocurrencies - DOGE, BTC, BHC, ETH, LTC, USDT. Mumwe mutambi anogona kushandisa akati wandei mari - unogona kuwedzera maakaunzi mune akateerana mari mushure mekunyora.
Kiredhiti dhipoziti kuFastPay kunoitwa ipapo ipapo, kubviswa kwemari mune akawanda mamiriro kunoitwa mukati maawa maviri. Panyaya yeiyo Rapid Transfer system, iyo yekubvisa inogona kutora kusvika kumazuva matatu ebhizinesi.
Miganhu yekuisa uye kubvisa:
Minimum dhipoziti huwandu - 1 DOGE, 0.01 USDT, 0.01 LTC, BHC, ETH, 0.0001 BTC, 10 USD, 150 ZAR, 10 EUR, 13 AUD, CAD, 87 NOR, 14 NZD, 1066 JPY, 37 PLN./li>
Huwandu hwakawanda hwekuzadzikiswa-kamwe-nguva (zvinoenderana nesarudzo yakasarudzwa) - 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN. Iko hakuna muganho wepamusoro wecryptocurrencies.
Mari shoma yekubvisa - 20 USD, EUR, 300 ZAR, 26 AUD, CAD, 175 NOR, 28 NZD, 2100 JPY, 75 PLN, 0.001 BTC, 0.01 ETH, 20 USDT, 1000 DOGE, 0.01 LTC, BCH.
Hapana anopfuura 4000 USD, EUR, 426398 JPY, 10 ETH, BCH, LTC, 10000 DOGE, 1000 USDT, 60460 ZAR, 34635 NOR, 5191 AUD, 5069 CAD, 14970 PLN inogona kubviswa pakutengesa.
Iyo kasino inoronga makwikwi evatambi nguva dzose. Ivo vanopa emahara ekuruka uye emari mibairo. Mibairo inogamuchirwa nevatambi vanotora imwe yenzvimbo dzekutanga makumi mashanu. Kuti utore chikamu mumakwikwi, unofanirwa kuenda kuchikamu che"Makwikwi", kunyoresa mumakwikwi akakodzera. Usati watora chikamu, ndapota verenga zvirevo nemamiriro acho zvakanyatsonaka.
Kugovaniswa kwemubairo homwe kunoitwa pachishandiswa iwo akaunganidzwa anokodzera mapoinzi. Ivo vanokudzwa nekuisa mabheti mumitambo yakafukidzwa nemakwikwi.
Bhonasi inopa kune FastPay kasino vatengi
Iyo FastPay bhonasi chirongwa inomiririrwa neinotevera kupihwa:
Deposit mabhonasi. Yakaunganidzwa sehuwandu hwehuwandu hwepamusoro - 50, 60, 65, 75, 100 uye 150%. Dhipatimendi mabhonasi anowanikwa kune vatsva uye varipo vatengi. Vatengi vatsva vanogona kutarisira kune yekutanga uye yechipiri dhipoziti mibairo. Sechikamu chekutanga kumusoro-kumusoro, vatambi vanogamuchira kusvika ku100 EUR, USD, 44,000 DOGE, 1.9 LTC, 0.5 BCH, 0.256 ETH, 370 PLN, 10,066 JPY, 140 NZD, 1,500 ZAR, 870 NOR, 130 CAD neAUD, zvinoenderana nemari yekudzoreredza. Pamusoro pezvo, mutambi anowana emahara akaruka. Huwandu hwehuwandu hweFastPay bhonasi yechipiri dhipoziti yakapetwa kaviri pane yekutanga. Mabhonasi edipoziti anopiwawo zvekukwiridzira neChipiri neChishanu, asi hazviwanikwe kune vese vatambi.
Hapana mabhonasi ekuisa mari. Inopihwa vatengi vecasino pavanosvika padanho nyowani muchirongwa chekuvimbika, pamwe neMugovera wega wega muchimiro chemahara ekuruka Mugovera mabhonasi anoitirwa kumusoro-soro kwevhiki rapfuura
Kubhadhara mari. Kubhadharwa kune vatambi vakasvika kanosvika nhanho 9 muhurongwa hwekuvimbika. Cashback inobhadhariswa muchimiro che10% yeuwandu hwese kurasikirwa kwese pamatope pamwedzi. Izvo hazvishande kune emabhonasi kubhejera.
Makodhi ekusimudzira. Makodhi akasarudzika ekusimudzira anokupa iwe mukana wekugamuchira mari yebhonasi kana mahara emahara. Ivo vanopihwa kune vanoshanda vatambi, nguva nenguva inoburitswa mune yekushambadzira tsamba yekutumira uye yepamutemo FastPay Telegraph chiteshi.
Rondedzero izere ye FastPay kasino bhonasi zvinopihwa zvinogona kuwanikwa mu"Promo" chikamu.
Magirazi e FastPay online kasino
Iyo online kasino inopa kuisa mabheti pane iyo huru FastPay webhusaiti uye ayo magirazi. Girazi reFastPay rinosiyana nenzvimbo huru chete muURL. Iyo ine zvakakwana zvakafanana mashandiro, interface, inobvumira vatengi vekasino kushandisa kugona kweayo yavo account, kugamuchira mabhonasi.
magirazi eFastPay anogonesa macasino:
govera mitoro pakati pesaiti;
ipa vatengi mukana wekupinda papuratifomu yemitambo, zvisinei nezvikonzero zvekunze uye zvemukati - ichivharira domaini hombe nevanopa Internet, basa rehunyanzvi.
Iyo FastPay yepamutemo webhusaiti inovimbisa chengetedzo yemunhu data uye zvemari zviitiko. Inopa huwandu hwakawanda hwevaraidzo yekubhejera - munhu wese anogona kusarudza yakakodzera kwazvo kwaari.